Waxaa jiraan 5 Waxyaabood oo ragga ay dumarka uga baahanyihiin balse aysan marnaba u sheegeen. Waxyaabahan ayaa ah kuwo muhiim ah oo hadii xaas walbo ay ninkeeda u sameyso ku kasbaneyso jaceylkiisa.
Jacaylka waxa uu dadka ka dhigaa kuwo wax walba sameeya, ninkaaga waxa uu si dhab ah iskugu dayay inuu si kasta kugu soo jiito, balse xaqiiqda waxay tahay hoos u dhaadhac, waxa uu rajeynayaa inaad ku qaadatid sida uu yahay waxa uu doonayaa in la jeclaado in lamaantiisa uu ka jelo jacaylka uu u muujiyo mid lamid ah si kalsoonidiisa ay u noqoto mid heer sare ah.
Ragga waa bini aadam, waxayna u baahanyihiin taageero dhinac kasta ah, marka uu shiido ama uu dhaqaalo beelo wuxuu kaa filayaa inaad gacan qabatid si kasta oo aad u awoodid gaar ahaan haddiiba aad awoodid marak ay heysato xaalad adag sida cadaadis wuxuu u baahanyahay dareen iyo jacayl.
Haweenka waxay jecelyihiin in la koolkooliyo, ragga ayaa lamid ah, ragga waxay qiimeeyaan marak aad hadiyad u keentid oo aad u karisid cunnada ay jecelyihiin, damaashaad u wad tani waa mid kamid ah waxyaabo badan oo ay ka helaan ragga.
Xiriir qoto dheer
Marka uu nin ku jecelyahay sidoo kale ayuu kaa filayaa, waxa uu rabaa xoogaa jacayl iyo xiriir qoto dheer waana mid kamid ah waxyaabaha ragga soo jiita.
Hadduu ku xushmeeyo, sida ayuu kaa filayaa nina kuma faraxsana in haweeneydiisa aysan xushmeyn run ahaantii wuxuu xittaa kaa filayaa inaad ku difaacdid bulshada dhexdeeda.